Valifaty tsara indrindra | NewsMada
Valifaty tsara indrindra
Par Taratra sur 28/12/2016
Nihorohoro sy nitaintaina avokoa ny rehetra, omaly, teo am-piandrasana ny didim-pitsarana mahakasika ilay minisitra teo aloha, voarohirohy noho ny resaka Soamahamanina. Taorian’ny fotoana namoahana ny didy, nihoraka ny rehetra fa afaka ny tenany. Latsa-dranomasom-pifaliana ny fianakaviany, nisento tokana ny mpiara-miasa aminy rehetra sy ny mpiray antoko ary ny vahoakan’ity tanàna malaza. Nisaotra an’Andriamanitra ny rehetra fa nivaly ny fangatahana.
Fangatahana, niasan’ny Fanahy Masina tamin’ny mpitsara sy ny tsaraina ary ireo mpanatrika ka nahitana ny marimaritra iraisana. Afaka avokoa ny tebiteby, teo amin’ny fanahiana ny mety hisian’ny korontana. Tsy nisy ny resy na ny naharesy. Tsy nisy koa ny nahazo tombony na ny maty antoka. Ny fifamelana no valifaty tsara indrindra. Fifamelana, mitondra any amin’ny fitoniana. Fifamelana, mitarika any amin’ny fampihavanana.
Efa noporofoin’Andriamanitra izany, tamin’ny nanomezany ny Zanany Lahitokana hanafaka sy hamonjy ny olombelona rehetra, tamin’ny alalan’ny Krismasy. Tsy nitana alahelo ary tsy nanao valifaty tamin’ny mpanjaka Heroda, izay nikasa hamono azy, i Jesoa fa namela azy satria valifaty tsara indrindra. ny fifamelana.
Samy hiaina ao anatin’ny filaminana izany ny Malagasy, hanao veloma ny taona 2016 ary samy hianoka fifaliana amin’ny fitsenana ny taona 2017. Aleo ny lasa, homba ny lasa, ary samy handevina any amin’ny varo-tsy mifody ny lonilonim-po ny tsirairay ka samy hahay hamela ny fahadisoana satria valifaty tsara indrindra izany.
Irariana izao mba ny tsara indray no hifanodiavana sy hifampirariana ny soa, hamakivakiana ny taona vaovao, izay handrandrain’ny rehetra fa ho mendrika noho izay lasa izay. “Fitaka anefa ny zava-drehetra fa ny atao no ho hita”, hoy ny fitenenana.